Ukuthengisa Okuhlukile Kwebhizinisi Kwibhizinisi | Martech Zone
Elinye lamathuba abakhangisi beBusiness to Business (B2B) ukubamba ithrafikhi yabantu abafuna ezinye izindlela. Abantu bacwaninga ngokuthengwa kohlelo lokusebenza noma abajabule futhi bafisa ukushiya umthengisi - basebenzisa amagama afana nalawa okunye ku, noma fana no, noma izinhlelo zokusebenza ezifana ukuchaza ukusesha kwabo.
Nasi isibonelo esihle - usesho lwe- ezinye izindlela zeWufoo:
IFormstack isebenzise leli thuba lokusesha ngokwakha i- ikhasi elivelele elichaza izinzuzo eziyinhloko zokusebenzisaI-Formstack ngaphezulu kweWufoo. Futhi-ke, njengoba ikhasi lifanele impela balibeka phezulu kakhulu ngalo. Ngingakhuthaza noma yimuphi umkhangisi ukuthi ashicilele amakhasi angaphakathi aqhathanisa aqhathanise izinhlelo zawo nomncintiswano wabo. Vele ube nobulungiswa ukuze unganikezwa isibunu sakho! 🙂
Ngokwengeziwe, kunezikhombisi-ndlela ezimbalwa laphaya ukuqinisekisa ukuthi ufakwe kuhlu:
okunyeUkuze - umkhombandlela omkhulu wesoftware ehlukile enezinga elivelele nezinjini zokusesha (yize ngithola amazinga ezicelo nemiphumela kaningi ayinembile).
USerchen - injini yokusesha yokuthola izinhlelo zokusebenza zefu… ifaka nokubuyekezwa.
GetApp - isayithi lokubuyekeza isoftware yebhizinisi ukuthola izinhlelo zokusebenza.
okuningi - isayithi lesikhombi elithola amawebhusayithi afanayo. Lokhu kufaka nefu neSoftware njengohlelo Lokusebenza.
I-SimilarSiteSearch - enye indawo yomkhombandlela ethola amawebhusayithi afana nawo. Lokhu kufaka nefu neSoftware njengohlelo Lokusebenza.
Qinisekisa ukusizakala ngalokhu kusesha njengoba uthuthukisa ibhizinisi lakho elisha. Yakha amakhasi wangaphakathi asebenze kahle kakhulu akhuthaza izinhlelo zakho zokusebenza ngaphezu kwezimbangi zakho. Ngizokwakha ikhasi lomncintiswano ngamunye ophezulu. Ngokwengeziwe, qiniseka ukwenza ukuthi izinhlelo zakho zokusebenza zibhalwe ohlwini lwezinjini nezinkomba ezihlukile ezingenhla. Unezinye izinkomba ongazincoma? Bangeze kumazwana abekiwe!
Tags: enye i-softwareokunye kuizinjini zokusesha zohlelo lokusebenzaizinhlelo zokusebenza ziyaseshab2bezinye izindlela b2bfana no